Daawo Sawiro Indhuhu ka daalayn oo laga soo qaaday dhulkii Cabdi Iley canfarta u Diiqay. – Xeernews24
Daawo Sawiro Indhuhu ka daalayn oo laga soo qaaday dhulkii Cabdi Iley canfarta u Diiqay.
22. September 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Sidda aan qormooyin door ah ku sheegnay dhulkan galbeedka gobolka Sitti ee sidda sharci daradda ah loogu ciyaaray waa dhulka ugu bilixda qurxoon Sawiradda waxaa soo qaaday dhalinti barbaarta ee halkanka kaga horjeeday Cabdi Iley.
Dhulka sidaan aad arkaysaan uu ilaahay ugu manaystay hodanimadda ayaa waxaa ku habsatay cadaalad daro Dulmi iyo bahdil kasta waxaana sababta ugu wayn iska lahaa dadka masuuliyiinta xagga siyaasada ku hogaamiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/dhuunyar.jpg 1530 2040 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-22 16:55:582018-09-22 18:12:53Daawo Sawiro Indhuhu ka daalayn oo laga soo qaaday dhulkii Cabdi Iley canfarta u Diiqay.
DHAGEYSO:”Waxaan soo miyir saday iyadoo laga arrinsanayo meeshii la igu aasi... Faahfaahino ka soo baxaysa qaraxyo goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho (...